Akasharwa saSoccer Star wegore ra2010 Anoti Achakangomirira Mubairo Wake
Chivabvu 17, 2011
Mutambi akasarudzwa kuveSoccer Star of the Year wegore ra2010 Charles Sibanda, uyo aitambira Motor Action gore rapera, haasati apihwa mubairo wake wemari, mwedzi mishanu mushure mekunge asarudzwa.
Sibanda, uyo ave kutambira chikwata chitsva cheFC Platinum, akagadzwa nyembe dzekuve mutambi akatamba zvakanwisa mvura kana kuti Soccer Star of the Year musi wa27 Ndira apo veZimbabwe Tourism Authority vakavimbisa kuti vachamupa mari yake yemubairo paizodzoka chikwata chemaWarriors kubva kuSudan kamakundano eAfrican Nations Championships mukupera kwaKukadzi.
Asi Sibanda audza Studio 7 kuti kusvika pari zvino haasati awana mubairo wake uyezve hapana kana munhu, kusanganisira veSports Writers Association, ari kumbotaura naye kuti achawana mari iyi rinhi.
Ati iye sekuvimbisa kwaChief Executive Officer veZimbabwe Tourism Authority, vaKarikoga Kaseke, Sibanda nevamwe vake vaifanira kuve vakawana mibairo yavo pakupera kwaKukadzi asi nhanhasi vackakamirira.
Sibanda akavimbiswa mari inoita iyo zviuru zvitatu nemakumi mashanu zvemadhora. Aimutevera Joel Ngodzo aifanira kutambiriswa zviuru zviviri, kwotiwo wetatu, Benjamin Marere achitorawo chiuru chimwechete chemadhora.
Vamwe vasere vaikwikwidza vaifanira kuenda kumba nemazana mashanu emadhora pamunhu.
Sibanda awedzera kuti kunyangwe mukombe waakatambidzwa musi wa27 Ndira akautorerwa achinzi mukombe uyu wakanga wangoshandiswa chete kupa mufananidzo kuna Kalusha Bwalya wekuZambia, uyo aive muyenzi anonyarikana, kuti afunge kuti paive nemubairo wemukombe uyu ipo pasina.
VeZimbabwe Tourism Authority vakazozvipira kubatsira veSports Writers Association nemari yemakundano aya mushure mekunge sangano revanyori iri rashaya mari yekuita mabiko aSoccer Star of The Year.
Izvi zvinotevera kubuda mukutsigira nhabvu kwakaitwa neveCommwercial Bank of Zimbabwe muna 2009. VeCBZ ava ndivo vaipa mari kumakundano eSoccer Star aya pamwe neePremier Soccer League.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura navaKaseke, asi mubati wehomwe weSports Writers Association Philmon Mhlanga ati iye kunonoka kupa mibairo iyi kwakakonzerwa nekuti vaKaseke vakapedza nguva zhinji vari kunze kwenyika nebasa izvo zvakaita kuti vambomisa kupa mari idzi.
Mhlanga akatyamadzwa kunzwa kuti Sibanda akatorerwa mukombe waakambopihwa achiti iye ari kutarisira kuti musangano wavarikuita nebazi rehurumende iri uchabuditsa chisungo chekuti vatambi ava vapihwe mari dzavo nechimbi chimbi.
Aka ndiko kekutanga kubvira makundano aya avambwa muna 1969 kuti Soccer Star atore nguva yakareba kudai asati apihwa mubairo wake.
Sibanda ati iye kunyangwe zvazvo anga achida kushandisa mari iyi, ave kungomirira kunzva kuti achaiwana rinhi sezvo asisina tarisiro huru.